Shan Ma Lay – Page 2
မြင်သူတိုင်း ရင်ခုန်နှုန်းတွေ မြန်သွား စေမယ့် မတ်မတ်သင်ဇာ ရဲ့ ရင်ဖိုစရာ ပုံရိပ်များ
June 18, 2021 aung aungLeaveaComment on မြင်သူတိုင်း ရင်ခုန်နှုန်းတွေ မြန်သွား စေမယ့် မတ်မတ်သင်ဇာ ရဲ့ ရင်ဖိုစရာ ပုံရိပ်များ
မြင်သူတိုင်း ရင်ခုန်နှုန်းတွေ မြန်သွား စေမယ့် မတ်မတ်သင်ဇာ ရဲ့ ရင်ဖိုစရာ ပုံရိပ်များ ပရိသတ်ကြီးရေ….ပုရိသတွေရဲ့အသည်းကျော် မင်းသမီးချောလေးဖြစ်တဲ့ သင်ဇာ၀င့်ကျော်ကို အားလုံး သိကြမယ်ထင်ပါတယ်နော်။ သူမဟာ အမြဲမိမိုက်နေတဲ့ ဖက်ရှင်ဒီဇိုင်းတွေနဲ့ပွဲအခမ်းအနားတက်ရောက်လေ့ရှိတာကြောင့် ပရိသတ်တွေကြားရေပန်းစား‌တဲ့ မင်းသမီးတ စ်လက်ဆိုလည်း မှားမယ်မထင်ပါဘူး။ သရုပ်ဆောင်ပိုင်းမှာလည်း ကျရာဇာတ်ရုပ်ကို အကောင်းဆုံးပီပြင်စွာသရုပ်ဆောင်နိုင်တာကြောင့် ရုပ်ရှင် ကားကြီးတွေလည်းအောင်မြင်အောင် ရိုက်ကူးထားနိုင်သူလေးပါ။ သင်ဇာ၀င့်ကျော်ဟာ ကျစ်လျစ်လှပတဲ့ခန္ဓာကိုယ်လေး ကိုပိုင်ဆိုင်ထားသူဖြစ်ပြီး မိန်းကလေးချင်းပါ‌ အရမ်းကြွေရတဲ့ သူလေးပါ။ သူမဟာ ခန္ဓာကိုယ်လှပဖို့အတွက်လည်း လေ့ကျင့်ခန်းတွေကိုအပြင်းအထန်ကြိုးစားလုပ်လေ့ရှိတဲ့သူလည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျ။ သင်ဇာဟာ မကြာခဏဆိုသလိုလည်း သူမရဲ့ညှို့အားပြင်း အလန်းစားပုံလေးတွေကို တင်ပေးလေ့ရှိသူပါနော်……။ ကဲ……ပရိသတ်တွေအတွက် သင်ဇာလေးရဲ့ချစ်စရာပုံလေးတွေကို ပြန်လည်မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်နော်။ မြင်သူတိုင်း ရင်ခုန်နှုန်းတွေ မြန်သွား စေမယ့် မတ်မတ်သင်ဇာ ရဲ့ ရင်ဖိုစရာ ပုံရိပ်များ ပရိသတ်ကြီးရေ….ပုရိသတွေရဲ့အသည်းကျော် မင်းသမီးချောလေးဖြစ်တဲ့ သင်ဇာ၀င့်ကျော်ကို […]
ချစ်စရာကောင်း တဲ့ ပုံစံ လေး နဲ့ အသည်းယားစရာကောင်းလွန်းနေတဲ့ လမင်းကဗျာ
June 18, 2021 aung aungLeaveaComment on ချစ်စရာကောင်း တဲ့ ပုံစံ လေး နဲ့ အသည်းယားစရာကောင်းလွန်းနေတဲ့ လမင်းကဗျာ
ချစ်စရာကောင်း တဲ့ ပုံစံ လေး နဲ့ အသည်းယားစရာကောင်းလွန်းနေတဲ့ လမင်းကဗျာ ကျရာဇာတ်ရုပ်တိုင်းကိုကျရာဇာတ်ရုပ်တိုင်းကို ပီပြင်ပိုင်နိုင်စွာ သရုပ်ဆောင် နိုင်သူ ကတော့ သရုပ်ဆောင် လမင်းကဗျာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အနုပညာအလုပ်ကို ဝါသနာပါလွန်းတာကြောင့်ဝါသနာပါလွန်းတာကြောင့်ဝါသနာပါလွန်းတာကြောင့်ဝါသနာပါလွန်းတာကြောင့် ဘယ်လိုနေရာမှာဘဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်လိုနေရာမှာဘဲဖြစ်ဖြစ် ပီပြင်ပိုင်နိုင်အောင် သရုပ်ဆောင်နိုင်သူတစ်ဦးဖြစ်တာကြောင့် အနုပညာသမား အချင်းချင်း လေးစား ချစ်ခင်နေကြတာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ လမင်းကဗျာဟာ လတ်တလောမှာတော့ အနုပညာလှုပ်ရှားမှုတွေ ရပ်နားထားကာ ကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကို ချဲ့ထွင် လုပ်ကိုင်နေတာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေ ပိုမိုအဆင်ပြေလာတာကြောင့် မကြာသေးခင်က အိမ်အသစ်တစ်လုံးကို ဝယ်ယူနိုင်ခဲ့တာပဲ ဖြစ်ပြီး ၂၀၂၁ နှစ်ဦးမှာ အိမ်တက်အလှူလေး ပြုလုပ်ခဲ့တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ လမင်းကဗျာဟာ အနုပညာလှုပ်ရှားမှုတွေ မရှိပေမယ့်လည်း ပရိသတ်တွေနဲ့ အဆက်သွယ် မပြတ်အောင် သူမရဲ့ ပုံလေးတွေနဲ့ ဗီဒီယိုတွေကို အမြဲတင်ပေးနေတာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ […]
ခပ်မိုက်မိုက် ဖက်ရှင် နဲ့ တစ်မျိုးလေး ဆွဲဆောင်မှုရှိလွန်းနေပြန်တဲ့ ဝင်းရွှေရည်သင်း
June 18, 2021 aung aungLeaveaComment on ခပ်မိုက်မိုက် ဖက်ရှင် နဲ့ တစ်မျိုးလေး ဆွဲဆောင်မှုရှိလွန်းနေပြန်တဲ့ ဝင်းရွှေရည်သင်း
ခပ်မိုက်မိုက် ဖက်ရှင် နဲ့ တစ်မျိုးလေး ဆွဲဆောင်မှုရှိလွန်းနေပြန်တဲ့ ဝင်းရွှေရည်သင်း သွယ်လျတဲ့ အမိုက်စား ခန္ဓာကိုယ်လေးကို ပိုင်ဆိုင် ထားတဲ့ တက် သစ်စ မော်ဒယ် ဝင်းရွှေရည်သင်း သိကြမယ် ထင်ပါတယ်။ ဆွဲမက်ဖွယ်ရင်သပ်ရှုမောစရာ အမိုက်စားပုံရိပ်လေးတွေနဲ့ ပုရိသတွေရဲ့ရင်ကိုပုရိသတွေရဲ့ရင်ကို ဆွဲဆောင်ညို့ယူထားတဲ့ အလန်းစား မော်ဒယ်သရုပ်ဆောင်လေး ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျ။ သွယ်လျ ပြေပြစ်တဲ့ ခန္ဓာကိုယ်နဲ့အတူ လှပ ကြည်လင်တဲ့ အသားအရေကိုပါ ပိုင်ဆိုင် ထားပြီး ဆက်ဆီကျတဲ့ သူမရဲ့ အမိုက်စားပုံတွေနဲ့ ညို့အားပြင်းပြင်း ဆွဲဆောင် နိုင်သူလေးလည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျ။ သူမရဲ့ အမိုက်စားပုံရိပ်နဲ့ ဆက်ဆီ ကျကျ ဗီဒီယို လေးတွေ ကို လူမှုကွန် ယက်ဖေ့ဘွတ်ပေါ်တွင် အများဆုံးတင်လေ့ရှိတာလည်းတွေ့ရပါတယ်ဗျ။ လတ်တလောမှာတော့ သူမ ရဲ့ အမိုက်စားအလှတရားတွေနဲ့ ညို့ယူဖမ်းစားထားတဲ့ အလန်းစား ပုံလေးကိုဖော်ပြထားတာ […]
June 18, 2021 aung aungLeaveaComment on ညှို့အားပြင်းပြီး ဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့အလှတရားတွေပေါ်လွင်ကာ ကြည့်မိသူတိုင်းကို ရင်ခုန်သွားစေခဲ့တဲ့ ဖူးပွင့်သခင်
ညှို့အားပြင်းပြီး ဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့အလှတရားတွေပေါ်လွင်ကာ ကြည့်မိသူတိုင်းကို ရင်ခုန်သွားစေခဲ့တဲ့ ဖူးပွင့်သခင် မင်းသမီး ချောလေး ဖူးပွင့်သခင် က တော့ အနုပညာ လောက မှာ နေရာ တစ်ခုကို ရယူထား နိုင်ခဲ့ပြီး အထာ ကျကျ ဆော့ကစား ထား တဲ့ အမိုက် စားTiktok လေးတွေ ကို ပရိသတ် တွေ ရှေ့ ချပြလေ့ ရှိ ပါတယ်ခင်ဗျ။ ချစ်စရာ ကောင်း တဲ့ အပြုံးလေး တွေ ကို ပိုင် ဆိုင် ထား နိုင်ခဲ့ တဲ့ သူမ က တော့ ကြော်ငြာ တွေကို လည်း ရိုက် ကူးလျက် ရှိနေ ခဲ့တဲ့ အနုပညာ ရှင် […]
ဓါတ်ဆရာရဲ့ရိုက်ချက်ကို ကြွေတာလား? ရတီ့ကိုကြွေတာလား? လို့ဆိုလိုက်တဲ့ သင်းရတီခင်
June 18, 2021 aung aungLeaveaComment on ဓါတ်ဆရာရဲ့ရိုက်ချက်ကို ကြွေတာလား? ရတီ့ကိုကြွေတာလား? လို့ဆိုလိုက်တဲ့ သင်းရတီခင်
ဓါတ်ဆရာရဲ့ရိုက်ချက်ကို ကြွေတာလား? ရတီ့ကိုကြွေတာလား? လို့ဆိုလိုက်တဲ့ သင်းရတီခင် ပုံလေးတွေတိုင်း သင်းရတီခင် တေစ်ယောက် ဆွဲဆောင်မှု ရှိရှိနဲ့ လန်းလွန်းနေတာ လည်းဖြစ်ပါတယ်။ သူမကတော့ ဆက်ဆီကျကျ ရိုက် ထားတဲ့ လန်းလွန်းတဲ့ ပုံလေးကို တင်ပေးလာတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်၊၊ ချစ်စရာ ကောင်းလွန်းလှတဲ့ မော်ဒယ် သင်းရတီခင် ရဲ့့ အလှပုံရိပ်လေး တွေ ကို ပရိတ်သတ်တွေ အတွက် ပြန်လည်မျှဝေပေး လိုက်တယ်နော်။ အရုပ်မလေးလို့ ချစ်စရာ ကောင်းပြီး အမိုက်စား ခန္ဓာကိုယ်ကောက် ကြောင်း အလှကို ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ တက်သစ်ဆ မော်ဒယ်လ် သင်းရတီခင် ကို သိကြမယ်ထင် ပါတယ်နော်။ မော်ဒယ်လ်လောက ကိုဝင်ရောက်တာ မကြာသေးပင်မဲ့ ပရိသတ် အများအပြားရဲ့ အားပေးဝန်းရံမှုကို တဖြည်းဖြည်း ရရှိလာတဲ့ ကြော်ငြာ […]
မိမိုက်လွန်း တဲ့ ဖက်ရှင် နဲ့ ဆွဲဆောင်မူ ရှိလွန်း နေတဲ့ ခင်အင်ကြင်းကျော်
June 18, 2021 aung aungLeaveaComment on မိမိုက်လွန်း တဲ့ ဖက်ရှင် နဲ့ ဆွဲဆောင်မူ ရှိလွန်း နေတဲ့ ခင်အင်ကြင်းကျော်
မိမိုက်လွန်း တဲ့ ဖက်ရှင် နဲ့ ဆွဲဆောင်မူ ရှိလွန်း နေတဲ့ ခင်အင်ကြင်းကျော် မြင်သူ တိုင်းငေးလောက် တဲ့ အမိုက်စား ခန္ဓာကိုယ်ကောက် ကြောင်း အလှကို ပိုင်ဆိုင် ထားတဲ့ တက်သစ်စ မော်ဒယ်လ် အိန်ဂျယ်ကို ကိုသိကြမယ် ထင်ပါတယ်နော်။ မော်ဒယ်လ်လောက ကိုဝင်ရောက်တာ မကြာသေးပင်မဲ့ ပရိသတ်အများအပြားရဲ့အားပေးဝန်းရံမှုကို တဖြည်းဖြည်းရရှိလာတဲ့ မော်ဒယ်ဖြစ်ပါတယ် ။ ယောကျာ်းလေး ပရိသတ်တွေရဲ့ ဝန်းရံအားပေး မှုရရှိထားတဲ့ သူမကတော့ social media လောကမှာ နာမည် တစ်လုံး နဲ့ ရပ်တည်နေသူ တစ်ယောက်လည်း ဖြစ်ပါတယ်။ သူမရဲ့ ဆက်ဆီ ကျပြီး အမိုက်စား ပုံတွေနဲ့ ညို့ အားပြင်းပြင်း ဆွဲဆောင်နိုင် သူလေးဖြစ်တာကြောင့် လက်ရှိ ဖေ့ဘွတ်စာ မျက်နှာမှာ […]
ရိုးရိုးလေးနဲ့မြင်သူတကာ ငေးမောသွားရအောင် ကို အလှတွေ ပိုနေ တဲ့အိချောပို
June 18, 2021 aung aungLeaveaComment on ရိုးရိုးလေးနဲ့မြင်သူတကာ ငေးမောသွားရအောင် ကို အလှတွေ ပိုနေ တဲ့အိချောပို
ရိုးရိုးလေးနဲ့မြင်သူတကာ ငေးမောသွားရအောင် ကို အလှတွေ ပိုနေ တဲ့အိချောပို စူစူလို့ ပရိသတ်တွေ ချစ်စနိုးနဲ့ ခေါ် ဆိုကြတဲ့ သရုပ်ဆောင် မင်းသမီး ချောလေး အိချောပို ကတော့ ပီပြင်ပြီး အပို လိုမရှိ ကွက်တိကျလွန်းတဲ့ သရုပ်ဆောင် မှုတွေကြောင့် အနုပညာ လမ်းကြောင်းမှာ အောင်မြင်မှု တွေများစွာနဲ့ ရှေ့ဆက်လျှောက် လှမ်းနေသူ အနုပညာရှင် တစ်ဦးလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ သူမဟာ အနုပညာ မျိုးရိုးမ ရှိဘဲ ” အနုပညာ ပျိုးခင်း ” မှတစ်ဆင့် လူရွေးချယ်ခံကာ ဝင်ရောက်လာသူ ဖြစ်ပြီး ယနေ့ချိန် မှာတော့ ထိပ်တန်း မင်းသမီးလေး တစ်လက်အဖြစ် ရပ်တည် နေပါပြီနော်။ စူစူဟာ လတ်တလော မှာတော့ အနုပညာ လှုပ်ရှားမှုလေးတွေ […]
June 18, 2021 aung aungLeaveaComment on ဆွဲမက်ဖွယ် ရင်သပ် ရှုမောစရာ အမိုက်စား ပုံရိပ် လေး တွေ နဲ့ အိချောပို
ဆွဲမက်ဖွယ် ရင်သပ် ရှုမောစရာ အမိုက်စား ပုံရိပ် လေး တွေ နဲ့ အိချောပို စူစူလို့ ပရိသတ်တွေ ချစ်စနိုးနဲ့ ခေါ်ဆိုကြတဲ့ သရုပ်ဆောင် မင်းသမီးချောလေး အိချောပို ကတော့ ပီပြင်ပြီး အပိုလိုမရှိကွက် တိကျလွန်းတဲ့ သရုပ်ဆောင် မှုတွေကြောင့် အနုပညာလမ်းကြောင်းမှာ အောင်မြင်မှုတွေများစွာနဲ့ ရှေ့ဆက်လျှောက်လှမ်းနေသူ အနုပညာရှင် တစ်ဦးလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ သူမဟာ အနုပညာမျိုးရိုးမ ရှိဘဲ ” အနုပညာ ပျိုးခင်း ” မှတစ်ဆင့် လူရွေးချယ်ခံကာ ဝင်ရောက် လာသူဖြစ်ပြီး ယနေ့ချိန်မှာတော့ ထိပ်တန်း မင်းသမီးလေး တစ်လက်အဖြစ် ရပ်တည်နေပါပြီနော်။ စူစူဟာ လတ်တလော မှာတော့ အနုပညာ လှုပ်ရှားမှုလေးတွေ သိပ်မလုပ်သေးဘဲ အနားယူနေတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ပရိသတ်တွေကို အလွမ်းပြေစေရန်လည်း သူမရဲ့ […]
ဒါကြောင့် ခေးလုကြီးလို့နာမည်ကြီးတာကိုး! ဆွဲဆောင် မှု ရှိရှိ လှပနေတဲ့ လုလုအောင်
June 18, 2021 June 18, 2021 aung aungLeaveaComment on ဒါကြောင့် ခေးလုကြီးလို့နာမည်ကြီးတာကိုး! ဆွဲဆောင် မှု ရှိရှိ လှပနေတဲ့ လုလုအောင်
ဒါကြောင့် ခေးလုကြီးလို့နာမည်ကြီးတာကိုး! ဆွဲဆောင် မှု ရှိရှိ လှပနေတဲ့ လုလုအောင် မော်ဒယ် လုလုအောင်ကတော့ ပရိသတ်တွေရဲ့ ချစ်ခင် အားပေးမှု ကို အခိုင်အမာရယူထားနိုင်ခဲ့တဲ့ အနုပညာရှင်တစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး အောင်မြင်လျက် ရှိနေတဲ့ မော်ဒယ်တစ်ယောက်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျ။ မိန်းကလေးတိုင်းအားကျရတဲ့ အမိုက်စားခန္ဓာကိုယ်ကောက်ကြောင်းအလှကို ရရှိ ပိုင်ဆိုင်ထားနို င်ခဲ့တဲ့ သူမ ကတော့ ယခုမှာ အနုပညာ အလုပ်တွေအနေနဲ့ ကြော်ငြာတွေကို ရိုက်ကူးလျက်ရှိနေကာ ချစ်စရာကောင်းတဲ့ ပုံရိပ်လေးတွေကို လူမှုကွန်ယက်ထက် တင်ပေးလေ့ရှိသူလေးပဲ ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျ။ ပရိသတ်တွေက ချစ်စနိုး နဲ့ ခေးလုကြီးလို့ ခေါ်နေကြ တဲ့ သူမ ကတော့ ယခုမှာ လူမှုကွန်ယက်ထက် ကို သူမရဲ့ ပုံရိပ်လေးတွေ မတင်တာကြာပြီဖြစ်ပြီး လွမ်းနေတဲ့ ပရိသတ်တွေအတွက် အထာကျကျလေးလန်းနေတဲ့ အမိုက်စားပုံစံလေးနဲ့ ဆွဲဆောင်မှု […]
June 18, 2021 aung aungLeaveaComment on အာဏာသိမ်းပြီး(၄)လအကြာမှာ မြန်မာ့အရေးကို ကုလထပ်မံ စိုးရိမ်လွန်ကဲကြောင်းထုတ်ပြန်
အာဏာသိမ်းပြီး(၄)လအကြာမှာ မြန်မာ့အရေးကိုလထပ်မံ စိုးရိမ်လွန်ကဲကြောင်းထုတ်ပြန် မကြာသေးမီက ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သော အကြမ်းဖက်လု ပ်ရပ်များသ ည် မြန်မာနိုင်ငံတစ်ဝှမ်းရှိ လူ့အခွင့် အ ရေးများဆိုင်ရာဝန်းကျ င်အခြေအနေ လျင်မြန်စွာယွင်း ကျဆင်းလာမှုကို ဖော်ကျူးနေသည့် အတွ က် မြန်မာနိုင်ငံရှိ ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့အစည်းများအ နေဖြင့် အထိတ် တလန့်ဖြင့် စိုးရိမ်ပူပန်လျက် ရှိပါသည်။ မြန်မာနိုင်ငံရှိ ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့အစည်းများအနေ ဖြင့် လက်ရှိအ ကျပ်အတည်းတွင် ပါဝင်ပတ်သက် နေသူများအားလုံးအနေ ဖြင့် နိုင်ငံတကာလူ့အခွင့်အရေးစံများနှင့် စံချိန်စံညွှန်းများကို လေ းစားလိုက်ကြရန် ထပ်လောင်းတိုက်တွန်းလိုက်ပါသည်။ နိုင်ငံတကာလူ့အခွင့်အရေးစံနှုန်းများကို လိုက်နာမှုဟု ဆိုရာတွ င် စစ်ဘက်ဆိုင်ရာလုပ်ဆောင်မှုများအတွင်း အရပ်သားများနှင့် အရပ်ဘက်ဆိုင်ရာခြေခံအဆောက် အအုံများကို ထိခိုက်မှုများနည်းနိုင်သမျှအနည်းဆုံးဖြစ်အောင် လုပ်ဆောင်ရမည့်။ တာဝန်နှင့် ရပ်ရွာလူထုများ၊ မိသားစုများမဟုတ် လူပုဂ္ဂိုလ်မျာ းအပေါ် သိမ်းကျုံးရောနှော၍ အပြစ်ပေးခြင်းကို တားမြစ်ရန် တာဝန်တို့အား စောင့်ထိန်းခြင်းလည်းပါဝင်ပါသည်။ #Crd